चीन कार प्रयोग प्रकार CW10 कारखाना र आपूर्तिकर्ता | लन्टाइसी
इनपुट ： DC 5V-3A, DC 9V-2A, DC 12V-1.5A कुल तौल १88 जी
आउटपुट ： 15W उत्पादन आकार ： *२ * १२० * MM MM मिमी
रूपान्तरण दर चार्ज गर्दै ： ≧ %०% कार्टन आकार ：5435 * 4040० *5435 मिमी (प्रति कार्टन p 45pcs)
प्रमाणपत्र: सीई, एफसीसी, RoHS प्रमाणपत्र मास्टर दफ़्ती तौल ११..5 किलोग्राम
CW10 एक कार प्रयोग वायरलेस चार्जर १W डब्लु हो कि कारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ प्रयोगकर्ताका लागि मोबाइल फोन चार्ज गर्न वायरलेस।
फोनमा केस भएको बेलामा के केवल पात्रहरू काम गर्छन्?
केहि फोन केसहरू (जस्तै वालेट केसहरू) वायरलेस चार्जिंग ठीकसँग काम गर्नको लागि अत्यन्त मोटो हुन सक्छ। प्लास्टिक, सिलिकॉन, रबर र छालाले बनेका केसहरूले वायरलेस चार्जिंगलाई बढी असर गर्दैन।
के कार मोन्ट्स वायरलेस चार्जिंगको साथ हस्तक्षेप गर्दछ?
केही कार आरोहणको साथ, तपाईलाई माउन्टमा फिक्स गर्न सक्षम हुन तपाईको फोनको पछाडि (प्राय: तपाईको केस र फोन बीचमा) एउटा चुम्बकीय धातु प्लेट संलग्न गर्न आवश्यक पर्दछ। किनभने बिजुलीको ब्याट्रीमा पुग्नको लागि धातु एकदम मोटो छ, तपाईंको फोनले राम्ररी चार्ज गर्न असम्भव छ।
के म उही समयमा एक फोन भन्दा बढि चार्ज गर्न सक्छु?
यो चार्जरमा निर्भर गर्दछ। केहिसँग दुई वा तीन प्याड बहुविध उपकरणहरूको लागि हुन्छ, तर प्राय जसो एउटा मात्र हुन्छ र एक पटकमा एकल फोन मात्र चार्ज गर्न सक्छ।
अघिल्लो: कार प्रयोग प्रकार CW06
अर्को: कार प्रयोग TS30